'Usilimaze kakhulu u-2020 singabagijimi,' kusho uMbuthuma - Impempe
‘Usilimaze kakhulu u-2020 singabagijimi,’ kusho uMbuthuma
Ukhala ngokuhlukunyezwa wu-2020 bengabagijimi uFikile Mbuthuma ongumgijimi owaziwayo wamabanga amade eNingizimu Afrika.
Awukho nowodwa umjaho obe khona kusukela kuvalwe izwe ngoMashi ngenxa yeCoronavirus, njengoba u-2020 kube wunyaka abafuna ukuwukhohlwa bonke abantu emhlabeni.
“Singabagijimi siphatheke kabi ukuthi asikwazanga ukuba yingxenye yemijaho efana neComrades Marathon. Sesethemba ukuthi izinto zizoshintsha ngonyaka ozayo,” kusho uMbuthuma odabuka eHarding.
Lo mgijimi useyibambe kwiComrades kusukela ngo-2006, yikho nje kumphatha kabi ukuthi ngo-2020 akawugijimanga lo mjaho ohlonishwayo emhlabeni. Nokho uthe akakaze ayeke ukujima yize ebazi kahle ukuthi awukho umjaho abezowugijima kulo nyaka.
“Besingahleli, besimatasa sizilolonga. Namanje kusenjalo ngoba sizama ukuzigcina siyimiqemane,” kusho uMbuthuma.
“Nokho ngingasho ukuthi angiwunona umqemane njenganonyaka odlule ngoba awukho umjaho engizibandakanye kuwona njengoba bengifisa. Izinga lami lokuba fithi lehle kakhulu. Kuzoba nzima uma sekufanele ngigijime emjahweni othile uma kwenzeka ngonyaka ozayo.”
UMbuthuma unethemba lokuthi uzogijima emijahweni ngonyaka ozayo kodwa ukuqala phansi kweCoronavirus kumenza alahlekelwe yithemba.
“Bengikhuluma nodadewethu izolo ngokuthi ngeke ngizihluphe ngokulungiselela iComrades Marathon ka-2021. Mancane kakhulu amathuba okuthi ikhona imijaho ezogijinywa ngonyaka ozayo njengoba isiqale phansi iCovid-19,” kusho uMbuthuma.
Uphethe ngokuthi baningi abagijimi abashayekile ngenxa yokuhlasela kweCovid-19.
“Bekuwunyaka omubi kakhulu. Abanye abagijimi baziphilisa ngakho ukugijima ngakho ukungabi khona kwemijaho kubalimazile. Iningi labo izinkontileka zinqanyuliwe ngoba bebengagijimi. Thina bazamile ukusikhokhela unyaka wonke kodwa nathi ngonyaka ozayo ngeke sisakhokhelwa. ICovid imoshe kakhulu futhi kubukeka isazoqhubeka nokumosha,” kusonga uMbuthuma.
Previous Previous post: URabada noHendricks bazoqinisa isikwati samaProteas
Next Next post: UMokwena uthi bakulungele ukubhekana nePirates